Zana-pehintany - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Zana-pehin-tany)
Ny zana-pehintany roa (natao miloko manga antitra)
Ny zana-pehintany na tropika dia ireo faribolana mirazotra roa manakaiky ny fehiben-tany (na ekoatera) izay manodidina ny Tany sady mamaritra ny toerana ahitana eo an-tampon-doha ny masoandro amin' ny fotoana mampaharitra indrindra ny andro sady mahafohy indrindra ny alina. Ireo faribolana ireo dia eo amin' ny 23° 26′ 13″ avaratra sy atsimon' ny fehiben-tany ka ny avaratra atao hoe Zana-pehintany Asorotany na Tropikan' ny Asorotany fa ny atsimo kosa atao hoe Zana-pehintany Adijady na Tropikan'ny Adijady.
Ny faritra anelanelan' ny zana-pehin-tany dia azo zaraina ho faritra manana toetanim-pehibentany sy toetanin-jana-pehintany,
Toetanim-pehibentany[hanova | hanova ny fango]
Mafana sy mando ny toetanim-pehibentany izay hita manodina ny fehibentany: tsy mihoatra ny 35 °C ny maripana noho ny fientona, nefa tsy maintsy ambonin’ny 18 °C noho ny fihazon’ ny rahona ny hafanana. Tsy dia misy fiovany firy ny maripana mandritra ny andro sy mandritra ny taona. Misy fizaràn-taona roa manorana izany faritra izany, dia manodidina ny volana Marsa sy Septambra. Ao amin’ izany faritra izany no ahitana ireo toerana be ala indrindra eto an-tany, dia ny ala any Amazonia any Amerika Atsimo sy ny ala any Indônezia any Azia.
Toetanin-jana-pehintany[hanova | hanova ny fango]
Ny faritra misy ny toetanin-jana-pehintany dia eo anelanelan’ ny fehibentany sy ny zana-pehin-tany (zana-pehintany Adijady sy zana-pehintany Asorotany). Tokana ny fizaran-taona be orana, dia amin’ ny fahavaratra. Ambany dia ambany ny rotsak’ orana, izay tsy mihoatra ny 250 mm. Ambony dia ambony anefa ny maripana izay mety mahatratra eo anelanelan’ny 40 °C sy 50 °C amin’ ny andro, nefa amin’ ny alina dia midina izany hafanana izany ka mety mangatsiaka tokoa. Amin’ ny faritra manandrify ireo zana-pehin-tany roa dia misy ny atao hoe antisiklônina izay miteraka toetany mafana dia mafana sady maina tsy misy orana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Zana-pehintany&oldid=1041422"
Voaova farany tamin'ny 10 Desambra 2021 amin'ny 16:17 ity pejy ity.